Ambatondrazaka - Wikipedia
17°50′00″S 48°25′00″E﻿ / ﻿17.833330°S 48.416670°E﻿ / -17.833330; 48.416670
Isam-ponina 34 484 mponina
Ambatondrazaka (na Ambato) dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambatondrazaka, Faritanin'i Toamasina. Ny isam-poniny dia 34484 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 31399 ary ny kaodin-distrika dia 313.
Ao anatin'ny faritan'ny Alaotra ny Ambatondrazaka, ny tanombary dia eo amandindonan'ny ambato.
1.1 Orinasa fitaterana
10 Rohy ivelany
Eo amin'ny faritra Alaotra, any amin'ny tany lemaka ambolena vary any avaratra andrefan'i Antananarivo ny misy azy. Misy tanety mamaritra io tany lemaka io. Mampisy ny lavaka ny fikaohan-tany mandrovitra ny ila iray. Ny vokatr'izany dia ny fidinan'ny haabo ny ranom-parihy ; sady manimba ny tanimbary. Ny nahatonga ny hoe Ambatondrazaka dia tsangambato napetrak'i Razaka izay nataony ho solon'ny Zanany satria izy tsy mba niteraka.Eo antsimo antsinanan'ny fiangonana katolika Avaradrova no tena nipetrahany izany vato izany;saingy efa nosoloina sy nafindra toerana eo antsimo andrefan'ny fiangonana sahabo 30metatra taty aoriana.
Any Ambatondrazaka, mihena dia mihena ny sampandraharaha fitaterana, tsy tonga ao Ambatondrazaka intsony ny lamasinina na dia mbola azo ampiasaina tsara aza ny lalamby. Tsy miasa intsony koa ny seranam-piaramanidina.
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia 5-25%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia haricot. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia tomates. Ny isan'omby dia 125. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia tomates. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 10 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 6 ny mponina no manao asa tanana. 72 ny mponina no miasa tany. 13 ny mponina no miasa amin'ny fanjonoana. 2 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 7 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 236 no isan'ny kisoa.
Ahitana fikambanam-pivarotra ao amin'io tanàna io. Ahitana fikambanam-piasatanana ao. Ahitana fikambanan-tantsaha ao. Ahitana fikambanam-panjono ao amin'io tanàna io. Ahitana fikambanam-pampiasa rano ao.
Misy masoivohon'ny banky. Misy seranam-piaramanidina akaikin'ilay tanàna. Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana hopitaly na toeram-pitsaboana ao. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Misy fianarana ambaratonga faharoa (lise). Ahitana orinasa mampiasa olona mihoatra ny 50. Andalovan'ny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona 10 hatramin'ny 50. Misy tranom-pitsarana maharitra any. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara lehibe. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 10 ora. Ahitana lalana godorô ao amin'ny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 13 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 35000 Fmg. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 35000 Fmg.
5 isan-jaton'ny mponina no tena mahantra dia mahantra. 45 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 4 volana. 15 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 35 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiompiana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiompiana. Misy sampandraharaha misahana ny fananan-tany ao. Misy sampandraharaha misahana ny fananan-tany ao. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny rano sy ny ala. Misy masoivohon'ny ministeran'ny rano sy ny ala. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa tany. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa tany. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiarovana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiarovana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fanabeazana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fanabeazana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny mponina. Misy masoivohon'ny ministeran'ny mponina. Misy masoivohon'ny fanaraha-mason'ny asa. Misy masoivohon'ny fanaraha-mason'ny asa. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa vaventy. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa vaventy.
Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 4. Tapaka in-1 ny lalana tao anatin'ny taona 1999-2001. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 74. Ahitana polisy ao amin'ilay kaominina. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina. 1 no isan'ireo mpamono olona tratra tanatin'ny taona 1999-2001.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambatondrazaka&oldid=1043877"
Dernière modification le 11 Febroary 2022, à 17:35
Voaova farany tamin'ny 11 Febroary 2022 amin'ny 17:35 ity pejy ity.